Ololaha Daryeelka Caafimaadka - Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > our Work > Ololaha Daryeelka Caafimaadka
Helitaanka daryeel caafimaad waa xaq, ma aha mudnaan. Iyadoo aan loo eegin dhalasho ama xaalad dhaqan-dhaqaale, dadku waxay mudan yihiin inay helaan daryeel caafimaad. CIRC waxay ku faanaysaa inay ka soo qayb gasho Ololaha Cover All Coloradans kaas oo horyaala SB22-1289, biilka sanadkan si loo balaadhiyo caymiska daryeelka caafimaadka dhammaan carruurta dakhligoodu hooseeyo iyo dadka uurka leh ee ku nool gobolkeena, iyadoon loo eegayn xaaladda socdaalka.
Muddo tobanaan sano ah, Colorado waxa ay ka shaqaynaysay sidii ay u balaarin lahayd helitaanka daryeelka dhalmada ka hor iyo uurka aad u wanaagsan iyo in ilma kasta oo Colorado ah la daboolo. Nasiib darro, kumannaan qof oo uur leh iyo carruur leh sharci socdaal oo aan sharciyeysnayn ee qoysaska dakhligoodu yar yahay ayaa weli laga tagay. Waxaan awood u leenahay inaan hubinno in kooxahan ugu dambeeya ay ugu dambeyntii helaan caymiska ay u baahan yihiin. Colorado waa in ay ku biirtaa liiska sii kordhaya ee gobolada hubinta in qoysasku ay heli karaan caymis, laga bilaabo uurka iyo sii kordheysa ilaa caruurnimada. Daryeel caafimaad oo wanaagsan oo loogu talagalay dadka uurka leh iyo carruurta ayaa guul u ah qoysaska, bulshooyinka, iyo mustaqbalka dhaqaale ee gobolkayaga.
Ma awoodi karno inaan ka tagno qoys kasta haddii kale gobolkayaga oo dhan ayaa dib u dhici doona - waa waqtigii aan dhammayn lahayn waxaan bilownay. SB22-1289 waxay wanaajin doontaa oo balaadhin doontaa fursadaha caymiska caafimaadka ee ay heli karaan carruurta iyo dadka uurka leh, iyada oo aan loo eegin xaaladda socdaalka, iyada oo la adeegsanayo isticmaalka dollarka federaalka ee gobolku hadda ka baxayo miiska. Qof kasta oo uur leh iyo ilmo kasta oo ku nool Colorado waxay u qalmaan inay helaan caymis la awoodi karo, oo dhammaystiran.
Wixii macluumaad dheeraad ah iyo wararka wakhtiga dhabta ah booqo:
HB22-1289 waa la soo bandhigay! Sharcigu waxa uu xidhayaa daldaloolada daboolka daryeelka caafimaadka dhallaanka iyo ka horreeya dhalmada
Denver, CO - Shalay, Guriga Bill 22-1289, oo sidoo kale loo yaqaan Cover All Coloradans (HB22-1289), oo uu kafaalo qaaday Wakiilka Gonzales-Gutierrez, Wakiilka McCluskie, iyo Senator Moreno, ayaa la soo bandhigay. Sharcigan ayaa wanaajin doona oo balaadhin doona fursadaha caymiska caafimaadka ee ay heli karaan carruurta iyo dadka uurka leh, iyada oo aan loo eegin xaaladda socdaalka, iyada oo laga faa'iidaysanayo isticmaalka dollarka federaalka ee gobolka.